सुशान्तको फेसवुक अपडेट भएपछि उनका फ्यानहरु हैरान, कसले गर्यो भन्दै हंगामा ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०५, २०७८ समय: २२:१९:४७
काठमाडौ । बलिउडका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधन भएको एक वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर पनि उनका फ्यानहरुले सुशान्तलाई सम्झिरहेका छन् । तर अचानक सुशान्तको फेसबुक प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन भएपछि उनका फ्यानहरु हैरान भएका छन् । दिवंगत सुशान्तको फेसवुक अपडेट भएका कारण उनका फ्यान हैरान भएको हुन् ।
तर सुशान्तको राजपूतको पीआर टीमले उनको फेसबुक प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन गरेका हुन् । सुशान्तको प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन भएपछि उनका दर्शकहरु हैरान भएका छन् । उनका दर्शकले तस्बिर परिवर्तन भएपछि दुख व्यक्त गरेका छन् । सामान्यताः कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएपछि फेसबुकमा कुनै पनि पोस्ट् अपडेट हुँदैन । तर, उनका पीआर टीमले उनको फोटो परिवर्तन गरेका छन् ।
उनको फोटो परिवर्तन भएपछि लाखौँ फ्यानले तस्बिरमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । जसमा एकजनाले लेखेका छन्, सुशान्त फर्किएर आएजस्तै लागिरहेको छ । अर्को युजर्सले लेखेका छन्, ‘सुशान्त सधैँ हाम्रो यादमा रहनेछन् ।’ त्यसैगरी, अर्का युजर्सले लेखेका छन्, ‘यो कसरी हुन सक्छ ? कसले यो परिवर्तन गर्यो ?’